आखिर कहिले अन्त्य हुन्छ कोरोना ? यस्तो गरिएको छ अनुमान : – Sadhaiko Khabar
आखिर कहिले अन्त्य हुन्छ कोरोना ? यस्तो गरिएको छ अनुमान :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २१, २०७८ समय: १५:३९:३८
कोभिड–१९ चाँडै नै अन्त्य हुन सक्छ। वास्तवमा, कोभिड–१९ ले अझै पनि चिकित्सा र वैज्ञानिक दुवै समुदायहरूलाई चुनौतीहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ। हो, कोभिड–१९ लाई सामना गर्न तीनवटा विभिन्न खोपहरू बजारमा छन्, जसरी थप अनुसन्धान कार्यहरू भइरहने समस्याहरूसँग लड्न भइरहेका छन्। यी र अन्य पहिचान हुन नसकेका कारणहरूले निश्चित रूपमा कोभिड–१९ को रोकथाम र निवारणमा सहायक हुनेछन्।
सटडाउन, इनडोर, सामाजिक दूरी, क्लोज डाउन २०२० मा वास्तवमै मद्दतको साथ कर्टमेलमेन्ट; सामाजिक र आर्थिक कारणले गर्दा, यी प्रतिबन्धहरू अब सम्भव नहुन सक्छ, धेरै दुर्लभ मामिलाहरूमा बाहेक। अस्तित्वको लागि आर्थिक गतिविधि को कारण, कोभिड–१९ अप्रत्यक्ष रूपमा जटिल प्रभावसँग फिर्ता आउन सक्ने अनुमान अनुसार भयो।
जस्तै अन्य सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक समस्याहरू; त्यहाँ जहिले पनि राजनीतिक र सम्भवतः आर्थिक लाभ पुँजीवादी संस्थाहरू हुन्छन्। यस हप्ता मात्र, अफ्रिकी राष्ट्र प्रमुखहरूले फ्रान्सको पेरिसमा आर्थिक सहयोगका लागि भेटे, कोभिड–१९ ले अफ्रिकी देशहरूको कारण बने। फ्रेन्च बैठक अफ्रिकी देशहरू र पश्चिमी देशहरू बीचको हजारौं बैठकभन्दा फरक छैन; परिणाम कहिल्यै अनुकूल भएको छैन। यदि कोभिड–१९ जान्छ भने, यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक र आर्थिक असर सदाका लागि रहने निश्चित छ।
नेपालले पहिलो छालको विरुद्ध चीनको वुहानबाट फैलिएपछि सुरुमा अनियन्त्रित संसारको महामारीको विरुद्ध धेरै हदसम्मको ज्यान गुमाउनबाट सफलता पाएको थियो। यदि २०२० मा नेपालमा लकडाउन नगरेको भए यो खोपको उपस्थिति वा कोभिडको उपचार गर्ने पूर्ण ज्ञान बिना नै पहिलो विशाल लहरको सामना गर्नु पर्ने थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति बिडेनको नेतृत्वमा खोप अभियान वास्तवमै सुरु नभएसम्म यो एकदम नराम्रै संकेत थियो।
भारत विश्वभरि खोप उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो र यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अरू कुनै पनि राष्ट्रले भन्दा बढी मानिसहरूलाई खोप लगाउने सम्भावना छ। यो प्रयासले तेस्रो लहरको सम्भावना कम हुने बनाउँछ। भाइरस उत्परिवर्तन गर्न सक्दैन यदि यसले एक होस्ट फेला पार्न सकेन र खोपले तेस्रो छाल रोक्न सक्छ।
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दुई हजार नाघेपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल (जनस्वास्थ्य आपतकालीन सेवा) लगाउने तयारी गरेको आभास हुन्छ । संक्रमितको संख्या बढेपछि रोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारी गरेको हो कि भन्ने छलफल भएको छ । तसर्थ , नागरिक हक र मौलिक हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिन्छ। यो संकटकाल राजनीतिक कारणले घोषणा गर्न लागिएको संकटकाल जस्तो होइन। बाहिर हिँड्नै नपाउने भन्ने होइन। त्यसैले संशय मान्नु नपर्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन्।
संक्रामक रोग ऐ’न २०३०, संक्रामक रोग ऐ’न २०२० र जनस्वास्थ्य सेवा ऐ’न २०७५, विपत् जो’खिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐ’न २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ रहेको छ। यी ऐ’नको आधारमा सरकारले स्वास्थ्यमा आपत्कालीन सेवा घोषणा गर्ने हो। जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखियो, महामारीको अवस्था आयो भने जनस्वास्थ्य ऐनमा संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ,’ कानुनका विज्ञको अनुसार सरकारलाई काम गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर स्वास्थ्य संक’टकाल लगाउने हो।’
विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणले मानव जगत्लाई नै संकटमा पारेको छ। पहिलो चरणको कोरोनाले ९/१० महिना थला–परेको व्यापार–व्यवसाय भर्खर लयमा आउन थाले पनि दोस्रो लहरको संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएपछि फेरि उद्योग, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय थला परेको छ। विगतको भन्दा दोस्रो लहरको संक्रमणले मानवीय क्षति अझै धेरै गरेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई आश्वासन दिएका छन् कि सरकारले नोभेम्बरमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावअघि सबै नागरिकलाई कोभिड–१९खोप प्रदान गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले खोप अनुदान सहयोग र खरिदका रूपमा खोप लिन विभिन्न खोप उत्पादन गर्ने देशहरू र विकास साझेदारहरूसँग कुराकानी गरिरहेको जानकारी दिए। – अन्न’पुर्ण पो’ष्टबाट । त’स्विर :- फा इल ।